Wargeyska The Standard: Madaxweynaha Guinea Ee Alpha Conte Wuxuu Ballan-qaaday Inuu Somaliland La Yeelanayo Xidhiidh Ganacsi Iyo Wada-shaqayn - Jigjiga Online
HomeSomalidaWargeyska The Standard: Madaxweynaha Guinea Ee Alpha Conte Wuxuu Ballan-qaaday Inuu Somaliland La Yeelanayo Xidhiidh Ganacsi Iyo Wada-shaqayn
Wargeyska The Standard: Madaxweynaha Guinea Ee Alpha Conte Wuxuu Ballan-qaaday Inuu Somaliland La Yeelanayo Xidhiidh Ganacsi Iyo Wada-shaqayn
Nairobi (Jigjigaonline/Standard) – Madaxweynaha waddanka Guinea ayaa ballanqaaday inuu wada shaqayn dhow iyo ganacsi la yeenayo Jamhuuriyadda Somaliland, xilli uu dalkaas booqanayo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey Conakry.
Wargeyska The Standard ee kasoo baxa waddanka Kenya ayaa warbixin uu ka qoray safarka madaxweyne Muuse Biixi ku tegay Guinea waxa uu ku sheegay in Somaliland uu ka caawiyey inay meel sare gaadhsiiso diblomaasiyaddeeda, isla markaana ay qaddiyadda aqoonsi raadinta gaadhsiiyeen galbeedka Afrika.
Caddadkii soo baxay maanta oo Khamiis ah ayaa waxa uu wargeysku ku yidhi: “Somaliland waxa kale oo ay samaysay tallaabo kale oo diblomaasiyadeed, booqashada Madaxweynaha waddanka Muuse Biixi Cabdi uu ku tegay Guinea. Booqashada madaxweyne Biixi ee dalka Galbeedka Afrika ee Guinea, waxay ku timid martiqaad uu ka helay madaxweyne Alpha Conde, waxayna muujinaysaa calaamad isa-soo taraysa ah in Somaliland laga aqbalayo qaaradda Afrika, xidhiidho dhaqaale iyo ganacsi oo korayana ay la yeenayso dalal kale.”
Wargeysku waxa kale oo uu intaa ku daray in Somaliland ay ballanqaad ka heshay Madaxweynaha Guinea, ayna wixii hadda ka dambeeya yeelan doonaan xidhiidh dhow oo ganacsi iyo wada-shaqayn ah.
“Madaxweyne Muuse Biixi iyo Madaxweyne Conde, waxay ballan-qaadeen inay samaynayaan dariiqyo wada-jir ah oo ganacsi ganacsi, ayna sare u qaadayaan xidhiidhkooda.” Ayuu yidhi wargeysku.
Standard waxa kale oo uu sheegay in dawladda Somaliland ay si isa-soo taraysa sare ugu qaadayso aqoonsi-raadinteeda, iyadoo u maraysa fursadaha ganacsiga ee dalalka Afrikaanka ah, iyadoo ku doodaysa in madax-bannaanida Somaliland ay awood u siinayso inay ganacsiyo la samaysato dalalka Afrika iyo dhinacyada kale ee caalamiga ah, taas oo faa’iido u ah dhamaan, xoojinaysana nabadgelyada, barwaaqada iyo ammaanka.
Wargeysku waxa kale oo uu tilmaamay in Madaxweyne Biixi oo doorashooyin xor, xalaal iyo nabadgelyo ah xilka kula wareegay 18 bilood ka hor, inuu abuuray hannaan diblomaasiyadeed oo loo marayo tubta aqoonsi raadiska, isla markaana uu booqashooyin ku tegay Ethiopia, Djibouti iyo Imaaraadka Carabka.
Jariidaddu waxa kale oo ay warbixinteeda ku xustay in Somaliland ay xidhiidho diiran oo soo kordhaya ay la leedahay dalalka bariga Afrika oo uu tusaale u soo qaatay Kenya, waxaanu yidhi: “Somaliland waxay mar horeba ku naaloonaysay xidhiidho diirran oo soo kordhaya oo ay la leedahay dalalka Bariga Afrika oo laga xusi karayo Kenya, waxayna doonaysa inay isku suuq-geyso khayraadkeeda aan la taaban iyo faa’iidada cusub ee ay u leedahay dhaqaalaha gobolka. Nabadda iyo degenaanshahaha iyo waliba suuqa ganacsi waxay xidhiidh la leeyahay sababta ay 10,000 (toban kun) oo reer Kenya ahi mar horeba ugu socdaaleen Somaliland iyagoo ka raadsanaya shaqooyin iyo fursado dhaqaale. Dadka Kenya u dhashay waxay ku sugan yihiin Caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo ay kaga shaqaystaan macalinimo, maamuleyaal hotel, makhaayarado cunto, naqshadeeyeyaal iyo lataliyeyaal beeraha, dhismaha iyo waxyaabo kale oo badan.”
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata, waxa uu isbarbar-dhig ku sameeyay khayraadka ku jira dalalka Guinea iyo Somaliland oo uu tilmaamay inay qani ku yihiin khayraad badan oo dihin, hase yeeshee waxa uu si gaar ah u tilmaamay in Jamhuuriyadda Somaliland ay hodan ku tahay macdahanaha Iron Ore, Unanium, Platinum, dahab, Copper tire, Manganese iyo macdano kale oo dunida ku yar (rare-earth metals).
Wargeysku waxa kale oo uu far waaweyn ku qoray in baadhitaano dhowaan laga sameeyey Somaliland lagu ogaaday inay hodan ku tahay dhagaxaanta macdanta ah ee gemstones, ruby, sapphire, saliid iyo gaas, kuwaas oo labada shirkadood ee Genel oo Ingiriisku leeyahay iyo RAK Gas oo fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta ay bilaabi doonaan inay soo saaraan horraanta sannadka dambe.
“Shaki kuma jiro in weftiga Somaliland ay doonayaan inay wax ka bartaan khibradda Guinea iyo aaggan oo hay’adda lacagta adduunka (IMF) ay ogaatay in isha ugu weyn ee dhaqaalaha Gunea uu yahay macdanta” Sidaas waxa yidhi Giorgia Albertin oo ah madaxa IMF ee dalka Guinea.
Warbixintu waxa kale oo ay soo qaadday Xeebta Somaliland oo ay ku sheegtay 900KM oo hodan ku ah kalluunka iyo cuntooyinka badda, dhul dihin oo ku wanaagsan wax-soosaarka beeraha, dhawaanna uu dalka UAE ku maalgeliyey dekadda Berbera $450 milyan oo shirkadda DP World ay wax kaga qabanayso dekedda Berbera.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta uu qoray wargeyska Standard ee kasoo baxa Kenya ayaa saacado kaddib waxa shir jaraa’id magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka Arrimaha dibedda Somaliya, kaas oo sheegay inay xidhiidhka u jareen dalka Guinea ee uu booqanayo Madaxweynaha Somaliland, iyagoo ka cadhooday qaabka loo soo dhoweeyey, kuna tilmaamay in dalkaasi uu faro-geliyey arrimaha gudaha iyo midnimada Somaliya.
DAAWO: Somaliya Oo Xidhiidhka U Jartay Guinea Oo Uu Booqanayo Madaxweynaha Somaliland Iyo Sababaha Ay Cuskadeen
DAAWO: Somaliland Oo Jawaab Ka Bixisay Go’aankii Somaliya Xidhiidhka Ugu Jirtay Guinea, Kana Hadashay Waxyaabaha U Qabsoomay Safarkii Madaxweyne Muuse Biixi